ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स पशुको विश्लेषण, W० डब्लू "जाने" | ग्याजेट समाचार
ऊर्जा सिस्टेम तपाइँको उत्पादनहरु मध्ये एक को विश्लेषण गर्न हामीलाई पुन: विश्वास गर्नुहोस्। सामान्य रूपमा, यो बारे मा हो संगीत र ध्वनीसँग सम्बन्धित ग्याजेट। तर यो केवल कुनै पनि होइन। हामी जनावरको स्वाद लिनको लागि सक्षम हुन पर्याप्त भाग्यशाली छौं ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स जानवर.
एक स्पिकर जसले पोर्टेबल संगीत उपकरणमा माथि उचाल्छ एक उच्च स्तर। के तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ? शक्ति चाहिन्छ? खैर २ कप लिनुहोस्… अथवा धेरै। विचार गर्न एक महत्त्वपूर्ण विकल्प यदि तपाईं आउटडोरका लागि तयार भइरहेको स्पिकरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने र त्यहाँ प्रशस्त शक्ति छ।
1 ऊर्जा सिस्टमको जनावर
2 घर बाहिर डिजाइन गरिएको
3 ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स जनावर यस्तो छ
4 मिल्दो र बहुमुखी कनेक्टिविटी
5 स्वायत्तता ताकि संगीत बन्द हुँदैन
6 ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स जानवर डाटा पाना
7 फाइदा र बेफाइदा
ऊर्जा सिस्टमको जनावर
जब हामी संगीतसँग सम्बन्धित उपकरणहरू परीक्षण गर्न गइरहेका छौं एनर्जी सिस्टेमसँग सँधै केहि भन्नुपर्दछ। Y यस अवस्थामा अधिकतम भोल्युम बढाउनुहोस् आउटडोर बक्स ब्याससँग हामीलाई परिचय गराउन। दुई शब्दहरूको सत्य अर्थमा एक ठूलो र शक्तिशाली वक्ता। ठूलो मागको साथ क्षेत्रलाई कभर गर्न इच्छुक, यसको व्यवहारले तपाईंलाई अनावश्यक छोड्दैन।
यसको आकार र तौलको बावजुद, हामी एक पोर्टेबल स्पिकरको सामना गरिरहेका छौं। तपाइँ तपाइँको घरको मनपर्दो कुनामा यसलाई "स्थापना" गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईं जहाँ जानुहुन्छ पनि लैजानुहुन्छ। यो अधिक पोर्टेबल वा ढुवानी गर्न सहज नहुन सक्छ। तर तपाइँ कति प्रस्ताव गर्नुहुन्छ संगीतको hours घण्टा सम्म विराम बिना पूर्ण शक्ति मा?
उसको नामको अन्त्यमा पशुको उपनाम संयोगले छैन। यदि तपाइँ तपाइँको संगीत कहिँ पनि पूरै सुन्न चाहानुहुन्छ भने, ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स जानवर तपाईको स्पिकर हो। हामी भर पर्दछौं, न कि बढी र न कम, त्यो Wat० वाटको शक्ति, एक अत्याचार। खुला ठाउँमा प्ले हिट गर्न नडराउनुहोस्, तपाईंको संगीत चर्को स्वरमा जारी रहनेछ। यदि तपाईं शक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ भने, अमेजनमा यहाँ तपाईंको ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स बीस्ट खरीद गर्नुहोस्.
घर बाहिर डिजाइन गरिएको
Su डिजाइन स्पष्ट छ कि एक टीम को लागी हो ल्यापटप। यसको विशाल हेण्डलमा हेर्नुहोस्। तपाइँको संगीत लिनुहोस् र तपाइँ जहाँ जानुहुन्छ साझा गर्नुहोस्, तर यसलाई साँच्चिकै ठूलो बनाउनुहोस्। ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स जानवर छ साढे। किलो भन्दा बढी तौल। तर यसको ठूलो आकार र महान पकड यसको ह्याण्डल द्वारा प्रस्तावित, बोक्न धेरै भारी वा असहज छैन.
सबै संरचना यो छ उच्च शक्ति, राम्रो गुणस्तरको कालो प्लास्टिकको निर्माण। तपाईलाई पम्प वा स्प्लेशसदेखि डराउनु हुँदैन, पक्षमा एक ठूलो बिन्दु। केन्द्रमा, आफ्नो हरियो मा ग्रिड एक वास्तविक उत्पाद प्रस्ताव गर्न बिल्कुल कन्ट्रास्ट गर्दछ। यस समयमा, हामी अन्य र in्गहरूमा ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स पशु भेट्टाउन सक्दैनौं। यो स्पिकर ध्यान दिएर जान्छ, र हामी यसलाई शुरू गर्दा धेरै कम।
ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स जनावर यस्तो छ
तपाईलाई धन्यबाद सममित डिजाइन, ऊर्जा सिस्टम को सबै भन्दा जनावर वक्ता हो यसको पछाडि जस्तै यसको मोर्चाको लागि। र यो डिजाईनले सम्भावितताको पालना गर्दछ कि तपाईंको संगीत दुबै पक्षबाट एक जस्तै सुनिन्छ। यसको लागि हामीसँग छ दुबै लाउडस्पीकरको दुबै छेउमा ° 360० ° ध्वनि अनुभवको लागि राखिएको.
यसको एक पक्षमा हामीसँग छ भौतिक बटनहरू स्पिकरसँग सीधा कुराकानी गर्न। केन्द्रमा हामीसँग बटन छ खुला बन्द। र यसको वरिपरिको लागि हामीले बटनहरू फेला पार्दछौं भोल्यूम नियन्त्रण, जसले अग्रिम वा ट्र्याक ढिलाइ पनि पुर्‍याउँछ। हामी पनि फेला पार्दछौं प्ले / पज बटन। र माथिल्लो भागमा अवस्थित एक बटन, पहुँच गर्न menu.
यदि तपाईंले हेर्नुभयो भने यसको पक्ष अर्को हामीले भेट्टायौं प्रविष्टि र बाहिर निस्कन को धेरै पोर्ट आउटडोर बक्स पशुसँग जुन छ। रबर क्याप मुनि नमी र splashes बाट तिनीहरूलाई बचाउन, जुन हामी सजीलै हटाउन सक्छौं हामी फेला पार्दछौं संभावनाहरूको विस्तार गर्ने विकल्पहरूको भीड। हामीसँग छ वर्तमान इनपुट जहाँ हामी ब्याट्री चार्ज गर्न केबलमा प्लग गर्नेछौं।
हामी संग Mm.mm मिमी ज्याक ढाँचा एनालग सहायक इनपुट पोर्ट। संग पनि माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड रिडर। र यसबाहेक, ए युएसबी कनेक्टर जहाँ बाह्य मेमोरी जडान गर्न सक्षम हुनुको साथै हामी कुनै उपकरण र जडान गर्न सक्छौं स्पिकरलाई शक्ति बैंकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। हामी हेर्छौं, धेरै विकल्पहरू हाम्रो मनपर्ने संगीत एक तरीकाले वा अर्कोमा बजाउन सक्षम हुन।
यहाँ तपाईं अमेजनमा नि: शुल्क शिपिंगको साथ ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स बीस्ट किन्न सक्नुहुन्छ
मिल्दो र बहुमुखी कनेक्टिविटी
हामीले हेरेका थियौं कि यसले प्रदान गर्ने जडान सम्भावनाहरूलाई दिईएको छ, उर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स जानवर एक मिल्दो र बहुमुखी उपकरण हो। हामीसँग यो चाखलाग्दो भन्दा बढि कुरा विचार गर्दछौं एफएम रेडियो। शारीरिक जडानको अतिरिक्त, "पशु" धेरै कुशलतापूर्वक जडान गर्दछ।
Su ब्लुटुथ जडान सुरक्षित र स्थिर छ प्रविधिलाई धन्यवाद v5.0 कक्षा दोस्रो जुन यो संग सुसज्जित छ। को दायरा संग १० मिटर टाढा सम्म। प्रोफाइल समर्थन गर्दछ ब्लुटुथ A2DP / AVRCP। यो छ २.2,4 गीगा हर्ज काम आवृत्ति। विच्छेदनहरू वा प्लेब्याकमा कटौतीहरूको बारे बिर्सनुहोस्।
स्वायत्तता ताकि संगीत बन्द हुँदैन
जब हामी पोर्टेबल स्पिकरको बारेमा कुरा गर्छौं, ब्याट्री यसको एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। र शक्ति वा डिजाइनको साथसाथै हामीसँग भएको ब्याट्रीलाई पनि ध्यानमा राख्दछौं। ऊर्जा सिस्टेम आउटडोर बक्स बीस्ट स्पिकर हो २,2.600०० एमएएच लिथियम-आयन ब्याट्रीले सुसज्जित छ। एउटा ब्याट्री हामी एक पटक साढे। घण्टाको अवधिमा थकित पूर्ण रूपमा शुल्क लिन सक्दछौं.
यद्यपि एक प्राथमिक यो अपर्याप्त ब्याट्री चार्ज लाग्न सक्छ १ non घण्टा "नन स्टप" संगीत प्रदान गर्न सक्षम। हामी प्रयोग भोल्युम स्तरमा निर्भर गर्दै एक स्वायत्तता छोटो वा लम्बाउन सकिन्छ।
ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स जानवर डाटा पाना
मोडेल आउटडोर बक्स पशु
ध्वनी प्रणाली २.० स्टेरियो
एकीकृत स्पिकरहरू Dyn गतिशील ”" पूर्ण-दायरा स्पिकरहरू
ब्लुटुथ जडान 5.0
ब्याट्री 2.600 mAh
स्वायत्तता 14 घण्टा सम्म
चार्ज समय 3.5 घण्टा
उपायहरू 490 x 190 x 220 मिमी
वजन 3675 g
मूल्य 159.00 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स जानवर
पोर्टेबल उपकरणमा W० W को पावर हुनु सामान्य छैन।
यस्तो सामग्रीसँग निर्माण गरिएको छ जुन आघातको प्रतिरोध गर्दछ र स्प्लासहरू, अलविदा चिन्ताको सामना गर्न सुरक्षित हुन्छ।
ºº०º चारै तिर ध्वनी यसको प्रत्येक पक्षमा दुई वक्ताको डबल सेटको लागि धन्यवाद।
3,5. kg किलोग्राम भन्दा बढी ओसारपसार गर्न भारी छ।
त्यहाँ कुनै अन्य र colorsहरू उपलब्ध छैनन्, यस समयमा हामीसँग केवल हरियो संस्करण छ।
एक एकल रंग
ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स जानवर
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » ऊर्जा Sistem आउटडोर बक्स पशुको विश्लेषण
फोर्टनाइट अध्याय २ सीजन १ को साथ फिर्ता आयो